Vizio Remote Xakamaynta Wadahadalka - Nalalka MediaLight Eexda
Wadahadalka Xakamaynta Vizio Remote
Waxaad ka heshay boggan sababta oo ah TV-gaaga Vizio ama codkaaga ayaa leh arrimo iskutallaab ah oo ku saabsan kontaroolada kale ee fog, oo ay ku jiraan kontoroolka nidaamka nalalka eexda ee MediaLight
Gaar ahaan, mugga hoos udhaca iyo badhanka 20% ee MediaLight ayaa faragalin kara. Hoos u dhigida mugga ayaa yarayn kara laydhkaaga, ama nalkaaga oo yaraadaa wuxuu hagaajin karaa muggaaga. Nalalka sidoo kale way libdhi karaan mararka qaarkood.
Tani dhib uma keenin macaamiisha badankood maxaa yeelay, waxay ka duwan tahay TV-yada badankood, Vizio waxay leedahay ikhtiyaar hoostiisa goobaha adeegsadaha loo yaqaan "Demi USB-ga TV-ga."
Haddii aad doorato qaabkan, nalalka ayaa daari doona oo damin doona Vizio TV iyagoon u baahnayn in loo isticmaalo qalabka korontada laga hago.
Xaaladdan oo kale waxaan kugula talineynaa mid ka mid ah laba ikhtiyaar:
1) Dhig qaataha MediaLight gadaashiisa TV-ga si ay uga baxdo khadka aragtida fog Vizio. Weli waad isticmaali kartaa iibsiga fog ee MediaLight adigoo kusii dhowaanaya ama gadaal u ah TV-ga leh foomka fog, sikastaba ha noqotee markii MediaLight loo dhigo 10% iftiinka ugu badan ee muujinta, runti maahan inaad waligaa ubaahantahay inaad markale dhigato.
2) Ku dabool helaha aluminium aluminium ah marka aad dajiso heerka dhalaalka. Awooda TV-ga iyo Vizio-kaaga fog ma kicinayaan nalalka.
Haddii dhibaatadaadu ay sabab u tahay baarka codka Vizio oo aan ahayn Vizio TV (ama haddii aad u baahan tahay inaad u isticmaasho qalabka durugsan sababaha aan kor uga fikirin), waxaan bixinnaa cabbir ka duwan oo aad ku isticmaali karto MediaLight. Way ka culustahay midka fog.
Gudaha Mareykanka, waxaad kaheli kartaa mashiin fog oo diiran oo bilaash ah amarkaaga MediaLight. Kaliya codso hal foomka hoose ama qor qoraal inta lagu guda jiro lacag bixinta. Haddii aad mid codsato ka dib markii aad horeyba u heshay amarkaaga, weli waa bilaash laakiin waxaad bixineysaa dhoofinta (qiyaastii $ 3.50 boostada heerka koowaad).
Haddii tani ay tahay amar hore, adiga waa in ku dar aqoonsi dalab ansax ah dalabkaaga.
Kuwa ka baxsan Mareykanka, waxaa jira ujro lacag ah oo ah $ 14 haddii aad kaliya dalbaneysid masaafo bilaash ah. (Kani waa kuweenna qiimaha ee boostada caalamiga ah ee heerka koowaad. Si kastaba ha noqotee, Vizio kuma iibiso TV-yo badan oo ka baxsan Mareykanka, markaa ma aragno tan ka baxsan Mareykanka inta badan).